Xaflad loogu talagalay wacyigalinta Talalka oo galabtay ka dhacday Boosaaso+SAWIRO – SBC
Xaflad loogu talagalay wacyigalinta Talalka oo galabtay ka dhacday Boosaaso+SAWIRO
Xafladan ayaa ahayd mid loogu talo galy in fariin lagu gaarsiiyo dadka ku nool deeganada Puntland gar ahaan gobalka Bari waxayna ka dhacday hoolka macadka caafimaadka magaalada Boosaaso.
Waxaana ka soo qayb galay madaxda degmada, madaxda wasaarada caafimadka, hayadaha WHO iyo UNICEF, sidoo kale waxaa xafladaas ka soo qayb galay culimauwdiin, dhalinyaro hooyoyin, iyo qaybaha kale ee bulshada.
Ugu horayntii waxaa ka hadlay xafladaasi ku xigeenka isu duwaha wasaarada caafimadka Puntland Siciid Maxamed Waraabe oo mahad balaaran u jeediyay intii ka soo qayb gashay xafladaas,isagoona sheegay in xafladan ay ku sabsantahay in fariin la gar siiyo hooyoyinka, dhalaanka iyo qaybaha kale ee bulshada, madama ay beri si toos ah uu u bilami doono talalka Maalmaha Caruurta,
Sidoo kale wax uu sheegay in talalka ay la socon doonan adeegyo kale oo caafimaad oo ay ka mid tahay in hooyada la siin doono kiniini nadiifin doona biyaha iyo kan gooryaanka, wax uu na xusay in ay socon doonto mudo shan cisho ah, sidoo kale wax uu sheegay in ay barnamijka talalka ay ka qayb qadan doonan 130 kooxood o iyagu diyaar u ah in ay bulshada u shaqayan si ay caafimad helan dhanka kale wax uu bulshada kula dar daarmay in ay la shaqeeyan guruubadaas.
Sidoo kale waxaa xafladaas ka hadlay ku xigeenka duqa degmada Boosaaso C/Qaadir Yuusuf Daahir oo isna ka hadlay muhiimada uu talalku uleeyahay bulshada madama uu yahay ka hortaga cudurka dabaysha iyo cudurada kale ee halista ah, isagoo u balan qaday xaafadii si haboon ula shaqaysa guruubyada in ay abaal marin siin doonan ka mamul ahana ay mar walba garab tagan yihiin cid walba oo hawshan ka shaqaynaysa.
Waxaa isna goobtaas ka hadlay Shiikh Maxamed Axmed Faarax oo ku hadlayay magaca culimada isagoo ka halay Waxa ay diintu ay ka qabto in cudurka laga hortago isagoo sheegay in ay diintu ogashahay in cudurka laga hortago loona bahanyahay in layska ilaasho cudurada ka hortaga leh in ay faafan wax uu walidiinta u sheegay in ay dan u tahay caruurtooda iyo hooyoyinka diintuna ay qabto in laga hortago cudurka,isagoona bulshada ugu baqay in ay la shaqayan dadka wada dantooda.
Wacyii galintan ayaa wax ay imanaysa xili la filayo in Maalinnimada Beri ah uu si toos ah uga bilabmo talaalku Puntland, waxaana wada hawshan wasaarada caafimadka Puntland iyo hayada UNICEF
Axmed Maxamuud Axmed (Axmed nuune)